I-WordPress: Izizathu ezi-3 zokufaka iJetpack Manje! | Martech Zone
NgoLwesithathu, uDisemba 4, 2013 NgoLwesine, July 9, 2015 Douglas Karr
Izolo ebusuku ngibe nenjabulo yokuba yisimenywa ku #atomicchat Ingxoxo ye-Twitter iqhutshwa ngabantu abangakholeki ku Ukufinyelela Kwe-Atomic. Sasixoxa ngama-plugins amahle weWordPress ne-plugin eyodwa obekufanele ngiyikhulise izikhathi ezimbalwa Jetpack.
I-Jetpack ishaja isiza sakho se-WordPress esingethwe ngamandla amabi weWordPress.com.
Ungavakashela Jetpack Yesiza seWordPress ngemininingwane eyengeziwe, kepha izici ezibalulekile ezi-3 ziyangigqama:
Uma ungakwazi ukufunda isiza sakho kahle kudivayisi ephathekayo, izivakashi zakho eziningi kungenzeka zikukhokhele. Izindaba ezimnandi ukuthi awudingi ukuchitha ithani lemali engqikithini entsha ephendulayo noma nge-mobile add-on, i-WordPress oyimboze ngetimu enhle, engasindi ephathekayo esebenza kamnandi ngaphandle kwebhokisi.
Ukube benginesikhalazo, bekungaba ukuthi ingqikithi empeleni ayigcinwa enkombeni yetimu - ngakho-ke uma wenza izinguquko ezithile, ukuvuselela i-plugin kuzozisula. Ngokwengeziwe, amapulatifomu wohlelo lokusebenza lweselula afana ne-iTunes anikezela ngemetha yemeta evula inkinobho yokufaka yohlelo lokusebenza lwesayithi. Lokhu kungaba isici esihle sale plugin.
On Martech Zone, sinamakholi ashukumisayo esenzweni asuselwa ezigabeni. Uma ufunda i-athikili yemidiya yokuxhumana nomphakathi, ibha eseceleni ibonisa ikholi yezokuxhumana ezenzweni ezivela kumxhasi. Kusebenze kahle impela kepha kudingekile ukuthi sihlele ama-plugin ethu ukuze sisebenze. Akusenjalo! Jetpack iza ne ukubonakala inketho ekuvumela ukuthi usethe imithetho eyinkimbinkimbi yokuthi ungayibonisa nini iwijethi ethile.
Ukuphakanyiswa komphakathi kokuqukethwe kwakho akusiyona inketho, kubaluleke kakhulu isu eliphelele. I-WordPress ixazulule le nselele ngokungeza amandla wokukhangisa okuthunyelwe kwakho kuwo wonke amanethiwekhi wakho wokuxhumana nomphakathi. Ngibheke ngabomvu ukuthi bangeze i-Google + futhi kungenzeka ngiguqule ibhulogi yethu iye kule plugin ngokushesha lapho ingezwa. Njengamanje sisebenzisa i- I-WordPress ku-Buffer i-plugin ne-buffer ukuze sabelane ngokuthunyelwe kwethu.
Mhlawumbe kubaluleke kakhulu nge Jetpack ukuthi ingowokuzalwa ku-WordPress futhi yakhiwe ngabathuthukisi be-WordPress. Ngokunikwa ikhwalithi yama-plugins amaningi emakethe, kumnandi ukuba nale nsiza ethembekile! Faka Jetpack manje bese usebenzisa lezi zici nokuningi, okuningi okuningi!
Tags: iwijethi enamandlaindaba ephathwayoizibaloukubonakalaamawijethiplugin wordpress